FICUS "BENGAL": DARYEELKA GURIGA, SAWIRADA IYO FIIDIYOWGA WAXTARKA LEH - SOOSAARKA DALAGGA
Waxaa jira hal geed oo aad u qurux badan oo adduunka ah, taas oo muuqaalkeeda u keento farxad hodanka ah ee dadka ku dhow.
Iyo qaar ka mid ah kooxaha jinsiyadaha xitaa xitaa u caabudaan isaga oo u jeeda ilaahyo siman.
Waxa uu leeyahay magaciisa - Banyan weyn
Magacani waxaa loo yaqaan 'bikali' bikali, kaas oo horeyba uga badnaa 200 sano waxay ku koraan Hindida fog iyo "daboolaya" aagga taajka 15 mitir oo laba jibbaaran km!
Laakiin dadku waxay barteen inay kobciyaan "nuqul" yar ee Banyan weyn, sidaas darteed qof kasta oo ka mid ah quruxda badan ee quruxda badan ayaa ku farxi kara qolalka qolalka ee ficuska weyn ee yaraaday.
Ficus benghalensis waxaa iska leh qoyska tufaaxa. Wuxuu ka yimid xeebaha kulaylaha Hindiya, Thailand, Burma, koonfurta Shiinaha.
Magac labaad - banyan - macnaheedu yahay qaab nololeed, marka warshad kaliya, sababtoo ah awoodaha gaarka ah ee xididdada anteenada iyo caleemaha, qaadataa muuqaalka kore ee geedka oo dhan.
Goolal tiro badan oo ku yaala "kaynta" waa qaybo ka mid ah nidaam isku mid ah oo ah Bengal ficus.
Muddo ka dib, waxay ku kori doontaa ballaar iyo sare, qabashada dhulal ballaadhan.
Kobcitaanku si joogta ah ayuu u socdaa, iyo dhammaan xidigaha cusub iyo kuwa cusub, oo ka soo jeeda caleemaha sare ilaa dhulka, qaado xididka carrada oo siiyaan geedo "geed" cusub.
Dabcan, guriga waa mid aan suurtagal ahayn in lagu celiyo mucjisadan.
Kuwa weli go'aaminaya falsafada noocan oo kale ah waa inay ahaadaan kuwo sabir ah oo ay leeyihiin qol ballaaran oo ay lagama maarmaan u tahay inay abuuraan jawi kulaylaha.
Si kastaba ha ahaatee, dhiirrigeliyayaal badan ayaa si guul leh ugu kordhay guryahooda "banyanchiki", oo badanaa loo yaqaan dhaqanka bonsai.
WARBIXIN: "Bonsai" ee Japanese waxaa loola jeedaa "geed ku xardhan" oo waa mid miro yar iyo nuqul naqshad ah oo geed ah.
Waa maxay banyan?
Qorayaasha qoraalka ereygan waa dadka reer Yurub. Markay Bortuqiis iyo Ingiriis Safar ee qarniyadii XV-XVI. ayaa ku tilmaamay mucjisooyinka qurxinta Hindiya ee ay soo arkeen, waxay u soo jeediyeen geedaha aan caadiga ahayn ee u adeegayay nooc sariir ah oo loogu talagalay suuqyada maxaliga ah iyo ururada kale ee dadka deegaanka.
Dabcan, hooska hoosaadka sida weyn, erayga "baniya" ayaa badanaa ku dhawaaqay, taas oo ah luqada Gujarati micnaheedu waa "ganacsade, ganacsade".
Iyadoo aan ka fikirin laba jeer, yurubiyiin "abaal marin" geedka laftiisa ereygan.
Sidaa darteed Bengal ficus wuxuu noqday "geed ganacsi".
Haddii aad xiiseyneyso ficuusyada geedaha, waxaan kugula talineynaa in aad barato xeerarka beerista noocyo noocyo kala duwan ah: Lirat, Blunt, Karika, Ginseng, Eden, Amstel King, Caleenta weyn, Retuz, Cagaaran yar iyo Benedict.
Fikradda sawirka "Belgian":
Way adagtahay in la qiimeeyo qiimaha qurxinta ee Fengus.
Laakiin inkasta oo uu yahay mid aad u qurux badan oo daryeelaya isaga uma muuqdaan kuwo aad u adag, kuwa go'aansada in ay koraan noocyada noocan ah waxay yeelan doonaan si ay u helaan qol wanaagsan oo iftiin leh. (ficus wuxuu ku kori karaa 40 cm, iyo ilaa 3 m)taas oo diirimaad joogto ah la damaanad qaadi doono (18-26 ° C), huurka badan iyo la'aanta qoraalada.
WARBIXIN. Xilliga jiilaalka, warshadda waa in laga saaro dabka, iyo xagaaga waxaa lagula talinayaa inay u qaadato beerta ama balakoonka.
Fikradda quudinta 1-2 jeer bishiiba. Sababtoo ah waxay kugula talinayaan isticmaalka bacriminta granit universal.
Warshadani waxay u baahan tahay waraabin joogta ah oo biyo leh jilicsan, iyadoon loo eegin xilliga xagaaga.
Waa in la waraabiyo marka lakabka ugu sareeya ee ciidda uu jarto 2-3 cm qoto dheer.
Si aad uhesho qoyaan ku habboon, waxaa fiican in aan ku buufin geedka oo dhan, laakiin si tartiib ah u tirtira caleemaha maro jilicsan oo qoyan.
Isla mar ahaantaana waxaad nadiifinaysaa caleenta boodada la ururiyey.
Inkasta oo halyeeyada quruxda badan ee ku hareeraysan ficus-banyan, kuwa ku hawlan gudaha taranta gudaha ee geedkan ma awoodi doonaan inay ku farxaan ubaxeeda.
Sababtoo ah hal sabab oo fudud - qolooyinka gudaha ee kulaylaha ee kulaylaha lama iloobin.
Fursad ay ku aragto nooca "classic" ee "inflorescences" - qaababka yaryar ee cakarta, waxay la mid yihiin berry - keliya kuwa beerta oo koraan Ficus Bengal waxay ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo.
Laakiin la'aanta ubax ka badan lacagtii loogu talagalay taajkii geedka this, taas oo si weyn u koraayo dhammaan jihooyinka.
Si kastaba ha noqotee, geedi socodka horumarinta treetopska looma oggola inuu boodo.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u leexiso geedka agagaarkeeda - sidaas darteed taajku wuxuu si siman u kobcin doonaa oo helo qorraxda ku filan.
Marka labaad, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo manjooyin joogto ah ee laamaha, si aad u siin kartaa taajka leh ay "dhudhunka" ka tago qaab qaab ah iyo cabbirka is haysta.
Wixii horumarinta caadiga ah ee ficus waxay u baahan doontaa dhul gaar ah.
Geedku wuxuu jecel yahay xayawaanka bacrin ah, waxoogaa asal ah ama dabiici ah.
Horeba ciidda diyaar u ah ficus waxaa laga iibsan karaa suuqa ama dukaanka khaaska ah.
Laakiin waad naftaada isku karin kartaa adiga oo isku dardaraya caleemaha, peat iyo caleemaha cagaaran.
Goobta gudaha ayaa si wacan u kori doonta haddii ay jirto lakab saaraha hoose ee dheriga.
Laga bilaabo beerista guriga banyan, waa in aan maskaxda ku heynaa in ficus Bengal sida badan dacaayad by gooyn,
taas oo rooting caadi ah u baahan tahay isku dar ah ciid iyo peat.
Laakiin si ay u faafiyaan dhaqanka this abuur, waxay qaadan doontaa waayo-aragnimo badan oo ku saabsan taranta dalagyada sida.
Marka da'da yar, ficus waa in lagu celiyaa sanad walba kore ee dhexroor ballaaran.
Dadka qaangaarka ah, waxay ku filan tahay in lagu beddelo dhulka hoostiisa carrada cusub.
Warshadani waxay si fiican u nadiifisaa jawiga gudaha qolka.
Ficus ma aha sun. Waxaa intaa dheer, waxay si fiican u nuugaysaa walxaha qaar waxyeelo u geysta bini'aadamka (phenol, trichlorethylene, benzene), iyaga oo isticmaalaya nafaqadooda.
Isla mar ahaantaana, dhirta ayaa walxaha firfircoon ku soo dhexjirta hawada, dabeecadda kobcinta iyo awoodda shaqaynta, caadada caadiga ah hurdo.
Inta badan, cayayaanka, si ay ugu faraxsan ee growers ubax, ka gudbaan ficus of Bengal.
Laakiin mararka qaarkood waxaa lagu soo weeraray mealybuga, caarada caarada, qashinka.
Xaaladdan oo kale, waa in dhirta bukaanka ahi ay diyaariso qubeys diirran ama maydhin maro, kadibna daaweyn kiimiko ah.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in lala socdo xaaladda caleenta.
Haddii uu qofku da 'weyn yahay oo caleemaha hoose hoos u dhacaan, waa inaadan walwal gelin.
Laakiin haddii dhirta yaryar ay ku dhacdo caleemo badan markasta meelo kala duwan, tani waxay calaamad u tahay in ay is-dhaafsiiso.
Bengal Ficus waxaa lagu tiriyaa waxyaabo badan oo suugaan ah.
Laakiin si aad u hubiso sida runta ah oo dhan halyeeyada ku saabsan qarsoodiga "Indian Guest" waa, kaliya waa suurtagal haddii aad maareyso inaad koraan geedkan weyn oo weyn oo caafimaad leh.
Ka fekerida inaad haysato ficus guriga, laakiin lumitaanka dhammaan noocyada noocyada kala duwan? Waxaan soo bandhigi doonaa maqaaladaa ku saabsan wakiilada ugu caansan uguna caansan: Moklam, Pumila White Sunny, Ali, Mikrokarpa, Dwarf, Abepeling, Ampelny iyo Triangular, De Gunthel.